Pan-Amin G (Amino Acid Infusion) – Online Myanmar Pharmacy
AccuChek (Instant Glucometer Set)
Free shipping All Myanmar
Pan-Amin G (Amino Acid Infusion)
Pack Size: 500 ml
Pan-Amin G (Amino Acid Infusion) - is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
ပန်နမင်း ဂျီဆေးသည် အကြောတွင်း သွင်းရသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဓါတ်အားဖြည့်ဆေးဖြစ်ပါသည်။ အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းရောဂါများ ၊ ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါအမျိုးမျိုးနှင် ့အစာကောင်းစွာမစားနိုင်သောလူနာများတွင် အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဓါတ်ဖြည့်စွက်ရန်အသုံးပြုပါသည်။ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်သာသုံးစွဲသင့်ပါသည်။
Recommended for provision of amino acids and energy in patients who require intravenous nutrition. Such conditions include hypoproteinemia, malnutrition, disorders of the gastrointestinal tract, infections, inadequate intake or refusal to eat
Myanmar Online Pharmacy တွင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလိုသည့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများကို စိတ်ချစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အဆင့်မြင့်အားဆေး၊ နှာစေးချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး၊ ကလေးအားဆေး၊ ရေသန့်စင်ဆေးပြား၊ ဓာတ်ဆား၊ အာရုံကြောဆေးများ၊ အရေပြားလိမ်းဆေး၊ ဆီးချိုတိုင်းစက်အစရှိသည်တို့ ကို မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ဝယ်ယူမည့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများကိုလည်း ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်၍ မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ငွေပေးချေရာတွင်လည်း ပစ္စည်းရောက်ငွေချေစနစ်ဖြင့် မှာယူနိုင်သလို အီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေစနစ်များဖြင့်လည်းမကြာခင် ပေးချေနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းမှာယူထားသည့် ပစ္စည်းများကို မိမိတို့ Myanmar Online Pharmacy မှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အိမ်တိုင်ရာရောက်စိတ်ချသေချာစွာ လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပြီး မှာယူသည့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်း များကိုလည်း သေချာစွာစစ်ဆေးပြီးမှ လက်ခံနိုင်သည့်အတွက် စိတ်အေးချမ်းစွာမှာယူနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ်။
သာယာသော ……. နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ။
“Always laugh when you can, it is cheap medicine.” ― Lord Byron
Copyright © 2021 Online Myanmar Pharmacy